Mazana manomwe nemakumi matatu emabhurugwa nemabhurugwa: Serial mbatya dzemukati dzemukati dzakasungwa muJapan
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Japan Kuputsa Nhau » Mazana manomwe nemakumi matatu emabhurugwa nemabhurugwa: Serial mbatya dzemukati dzemukati dzakasungwa muJapan
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • tsika nemagariro • Japan Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Shopping • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Iyo inoratidzika kunge isinganzwisisike kesi yekupfeka zvipfeko zvemukati haina kunyanya kujairika muJapan.
Mapurisa eJapan akasunga murume nekuba bras nemapanti.
Murume aiba zvipfeko zvemukati zvevakadzi mumachira.
Mapurisa akawana zvidimbu zvinomwe mazana manomwe nemakumi matatu zvembatya dzemukati dzakabiwa mumusha wemusori.
Mapurisa eguta rekumaodzanyemba kweJapan reBeppu akasunga munhu aipomerwa mhosva yekuba zvipenga zvevakadzi zvemukati zvinosvika mazana manomwe nemakumi matatu kubva pamari yekuwachisa, mushure memakore makumi maviri nemaviri mudzidzi wepakoreji ataura kuti mbatya nhanhatu dzemukati dzakanyangarika munzvimbo yekuwachira.
Mapurisa akabata zvidimbu mazana manomwe nemakumi matatu zvezvipfeko zvemukati zvevakadzi panguva yekutsvaga, izvo zvakateedzera kumhan'arira kuna Tetsuo kubva kumukadzi wechikadzi wepakoreji ane makore makumi maviri nerimwe asina zita. Akaudza mapurisa kuti Tetsuo akabvuta mbatya nhanhatu dzemukati mune yekuwachira musi waAugust 730.
Mupomeri anonzi akazvireurura nekuba mbatya dzemukati dzakawanda dzaiwanikwa pamba pake.
Iyo inoita senge isinganzwisisike kesi yekupfeka mbatya dzemukati haisi chaiyo isingawanzo mukati Japani.
Muna Kurume, Takahiro Kubo, ane makore makumi matatu ane magetsi, akapomedzerwa nezviremera zvekuba zvidimbu makumi mana nemazana mana zvemukati uye zvekushambira kubva kuvasikana vechidiki kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwedunhu reSaga.
Muna 2019, mapurisa akawana zvinhu zvinopfuura chiuru nemazana gumi zvemachipfeko emukati evanhukadzi zvakachengetwa mumatambudziko emangwana mushure mekupamba imba yaToru Adachi mudunhu reOita prefecture.